Isaga oo ka hor hadlayey dhageystayaal u badan kuwa Israel taageera oo ku sugan Washington, ayaa John Kerry waxa uu ka digay in Israel ay “Kuwa wajahan tahay meel halis ah” sababo la xiriira siyaasadda dowladda Israel ee ku aadan Falastiiniyiinta.
Kerry oo ka jawaabayey su’aal ay weydiiyeen suxufiyiinta xilli uu ka qeyb galay kulanka Saban ee machadka Brookings ayaa hanaanka nabadeed ee daba dheeraaday ku qeexay “Waa sii xumaaneysa. Waxayna ku socotaa jiho qaldan”
“Diidmo xooggan” Waxaa hadallada Kerry sidaas ku qeexay wargeyska Times of Israel.
Kerry ayaa sheegay in xalinta muranka ka dhex oogan Israel iyo Falastiin ay weli tahay mid muhiim ah, inkasta oo ay jiraan xaalado ka halis badan oo ka socda dalalka deriska la eh ee Iraq iyo Syria.
Maamulka madaxweyne Obama ayaa toddobaadkii tagay meesha ka saaray cadaadis waqti dambe yimaada oo la saaro Israel oo ay ka mid tahay in loo maro QM.
Saraakiisha Mareykanka, ayaa si kastaba, waxay aad u dhibsadeen iska dhego tirka Israel ee ku aadan cambaareynta mas’uuliyiinta Mareykanka ee deegaameynta ay ka waddo dhulalka la qabsaday ee Falastiin.